Masjidka Turkiga ee magaalada Zürich oo shalay galab lagu qabtay Muxaadaro Diini ah oo gundhig u aheyd dhibaatada Qurbaha iyo Soomaalida. | Xisbiga Xuriyada (The People Of Freedom)
Masjidka Turkiga ee magaalada Zürich oo shalay galab lagu qabtay Muxaadaro Diini ah oo gundhig u aheyd dhibaatada Qurbaha iyo Soomaalida.
Zürich April 9, 2012 (MMG) – Waxaa shalay galab ka dhacay Masjidka Turkiga ee Magaalada Zürich Muxaadaro Diini ah oo taabanaysay, islamarkaasna waxtar u leh dadka Soomaalida ee Muslamiinka ah, waxaa bixinayey SheikhCismaan Usuuli oo ka yimaaday magaalada London ee dalka Britain
Sheikh Usuuli oo ka mid ahaan jiray Jaaliyadda Soomaalida ee Kanton Zürich ayaa waxay Muxaadaradiisu gundhig u ahayd Soomaalida ku nool Qurbaha gaar ahaan dhallinyarada iyo Qurbaha.
Sheikh Cismaan Usuuli ayaa ugu horreyntii si kooban uga hadlay Micnaha Erayga QURBAHA, kadibna u gudbay dhibaatooyinka ina heysta iyo xalkooda, wuxuuna ku saleeyey laba tiir oo la aaminsan yahay inay asal u yihiin xalka dhibaatooyinka bulshada Muslimka:
– Fahamka Mabaadi’da Guud ee Islaamka.
– Fahamka waaqaca dadka Soomaalida ah ku nool Qurbaha.
Haddaba qofka muslimka ah hadduu rabo inuu xal u raadiyo dhib kasta oo heysta waa inuu is yiraahdaa xaggee baad ula laabataa xalka dhibaatadan, haddii si kale loo dhigo ayuu yiri sheikhu waa inuu jiraa ilo (sources) uu qofka kala soo bixi karo arrinta iftiimin karta xalka dhib kasta ee jira.
Sidaas darteed Sheikh Cismaan Usuuli wuxuu soo qaatay Aayado Quraanka Kariimka ah iyo Sunada Nabiga (NNK) ee tilmaameya xalka sidii loogu bixi lahaa dhibaatada jirta, wuxuuna intaa uu raaciyey inay jiraan Culumo fasiraya ilaha laga heli kara xalka dhib kasta ee soo waajihda muslimiinta meel weliba ha joogeen.
Balse wuxuu sheikh Usuuli Soomaalida u caddeeyey in lo baahnayn in qofka muslimka uu xal ka raadiyo ilo aan Islaam aheyn marka laga hadlayo xalinta arimaha la xiriira Adduunyada iyo Aadamiga, Taasi micnaheed ma ahan inaan la kaashan karayn cilmiga sayniska hadduusan ka hor imaaneynin mabaadi’da guud ee islaamka.
Sidoo kale Sheikh Sheikh Cismaan Usuuli wuxuu caddeeyey in Diinta islaamku aysan ahayn Diin xerxeran oo ciriiri ah, balse ay tahay Diin Raxmad badan, wuxuuna qodobkaas si cad oo waafi ah uga hadlay in Quraanka Kariimka iyo Sunnada Nabigeena CSWS nagula faray inaan ka shidaal qaadano dhaqanka suuban Nabi Maxamed iyo Axsaabtii ka danbeysay ay ku dhaqmi jireen.
Dhanka kale Sheikh Cismaan, wuxuu ka haday in laga digtoonaada Adduun Jaceylka, wuxuuna sheegay in haddii uu qofka Muslimka ahi uu is Raacsiiyo Hawada Adduunka oo keliya ay u horseedi karto inuu maro waddo Xun oo dhib badan ee u horseedi karta Aakhiro beel iyo Adduun beel intuba, waayo ayuu yiri Sheikhu Adduunku waxaa lagu yahay Safar oo loogu socdo Aakhiro.
Hase yeeshee Sheikh Cismaan Usuuli wuxuu kaloo uu ka hadlay xiriirka iyo calaaqaadka labada qof oo Muslimka ah inuu yahay inay isugu kaalmeeyaan Kheyrka iyo wanaaga, balse ma ahan inay isugu kaalmeeyaan xumaan iyo sharta, wuxuuna intaas uu raaciyey in la soo dhaweeyo Walaalaha Muslimka ah Jinsiyad kasta ha lahaadaanee, marba haddii ay haystaan Towxiidka Islaamka Kulmiya ee ah “LAA ILAAHA ILLALLAAHA MAXAMADA RASUULALLAAHA”.
Sheikh Cismaan Usuuli oo Muxaadaradiisa ku saabsaneed Nolosha Qurbaha ayaa wuxuuna si cad oo waafi uga hadlay Waajibaad waalidiinta Islaamka ka saaran tarbiyada Caruurtooda, gaar ahaan Muslimiinta ku nool Qurbaha ee loogu badan yahay.
Ugu danbeyntii waxaa Kulankii shalay ee kheyrka badanaa ee ka dhacay Masjidka Turkiga ku dhamaatay si wanaagsan, halkaas oo laga soo jeediyey ducooyin loo ducaynayo guud ahaan Muslamiint, gaar ahaan Soomaalida meelkastoo ay joogaan.
Jaamac Cali Kulmiye “Shabaabku yey beegsadaan.? waxey beegsadaan Hawiyaha keliya, cid kale ma beegsadaan, waxeyna la dageen dadkii ugu cuslaa” Somalia sees recovery with new Turkish investments